Maamulka Puntland oo markab dagaal ka howlgeliyey xeebaha uu ka taliyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa markabkii ugu horeeyey oo ay yeeshaan ciidamada Ilaalada Baddaha maamulkaas ka hoelgeliyeyey xeebaha uu maamulo. Doontaan dagaal waxaa maamulka ku wareejiyey shirkadda Somali Security Service (SSS).
Munaasabad lagu shaacinayey howlgalka iyo shaqada Markabkan dagaal ayaa shalay ka dhacday Dekada magaalada Boosaaso ee xarrunta gobolka Bari.
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka maamulka Puntland, Cabdinuur Cilmi Biindhe, Gudoomiyaha gobolka C/samad Maxamed Gallan, Duqa degmada Boosaaso, saraakiil ciidan iyo madax ka socday shirkadda Somali Security Service (SSS) oo maamulka ka caawisay howlgelinta markabkan ayaa ka qeybgalaya munaasabadda bandhiga.
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka Puntland, Cabdinuur Biindhe ayaa sheegay in markabkan ka qayb qaadan doono ilaalinta xeebaha Puntland oo ay kala dagaalamayaan kalluumaysiga sharcidarada ee Jariifka ku ah khayraadka badaha Puntland.
Wasiirka wuxuu ciidamada howl galkan qabanaya kula dardaarmay in ay soo qabtaan doonyaha sida sharci darada u kalluumaysanaya, Sidoo kalana ilaalo habeen iyo maalin ka sameeyaan xeebaha.
Madax Shirkadda SSS, Cabdiwali Cali Taar ayaa sheegay in hirgelinta Markabkan ay ka dambaysay kadib markii madaxweynaha Puntland bulshada ugu baaqay isku tashi.
Doontaan dagaal ee ay iska kaashadeen maamulka Puntland iyo Shirkada SSS ayaa waxaa ku xiray qoriga Lidka siyaaradaha ee loo yaqaan (Zuu), waxaana la socda ciidan hubeysan.